ချယ်ဆီး vs အာဆင်နယ် | ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲအား နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ခြင်း - Sports Home Time
အပြာရောင်အသင်းဖြစ်တဲ့ ချယ်ဆီးဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ရရှိထားပြီဖြစ်ပြီး ဆာရီရဲ့ ပထမဆုံးသော ဆုဖလား အောင်မြင်မှုအဖြစ် ယူရိုပါလိဂ်ဖလား အနိုင်ရဖို့ ရည်ရွယ်နေတာပါ။ အနီရောင်အသင်းဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်ကိုတော့ ယူရိုပါလိဂ်ဖလား သုံးကြိမ်အနိုင်ရ အမ်မရီက ဦးဆောင်ပြီး ချန်ပီယံဘွဲနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ရလိုနေတာဖြစ်တယ်။
အမ်မရီဟာ ဆီးဗီးလာအသင်းမှာ ယူရိုပါလိဂ်ဖလားကို အတွေ့အကြုံတွေ ရင့်ကျက်ထားပြီး ဒီနှစ်သင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပြိုင်ပွဲမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံဖူးကြသလို အဓိက ကစားသမာေးတွ မပါပဲယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ဘာကူဟာ အင်္ဂလန်မှာနဲ့ မတူညီတဲ့ အားပေးမှုအငွေ့အသက်တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။
ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ နှစ်သင်းဟာ ဘယ်လိုနည်းစနစ်တွေ ကျင့်သုံးလာမလဲ? အရင်တွေ့ဆုံမှုတွေကကော ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ? ဒါတွေကို လေ့လာကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ချယ်ဆီးအသင်း လူစာရင်းက ဘယ်လိုလဲ
ချယ်ဆီးကွင်းလယ်လူ ကန်တီဟာ ဒူးဒဏ်ရာရနေခဲ့ပြီး ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပါဝင်ဖို့က 50-50 အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ လော့တပ်ချိစ် ပါဝင်ဖို့မရှိတာကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးနေရာ ကိုဗာဆစ်နဲ့ ဘာကလေတို့ ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ ကန်တီကို လက်လွတ်ရခြင်းဟာ ချယ်ဆီးအတွက် ကြီးမားတဲ့ ဆုံးရှူံးမှုပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲတွေမှာ ကိုဗာဆစ်ထက် တိုက်စစ်၊ ခံစစ် တောင်းဆိုခံရမှု များပြားသလို ဘောလုံး ပိုင်ဆိုင်ထားချိန်နဲ့ ဘောလုံးမရှိချိန်တွေမှာ ကိုဗာဆစ်ထက် လွှမ်းမိုးမှု ကြီးမားသူဖြစ်တယ်။
ဘာကလေဟာ လော့တပ်ချိစ်နေရာ အစားဝင်လာမှာပါ။ ဆာရီရဲ့ ကွင်းလယ်လုပ်ဆောင်မှုမှာ လော့တပ်ချိစ်က ဘောလုံးကို ပိုကြာကြာ ကိုင်ထားနိုင်တယ်၊ အလှိမ်အခေါက်တွေ ပိုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီး တိုက်စစ်ပိုင်း ပိုထက်မြက်တယ်။ ဘာကလေကတော့ အခွင့်အရေးတွေ ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုပေါက်ကွဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ဘာကလေဟာ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ ကောင်တာတိုက်စစ်တွေကို ဟန့်တားဖို့ရာ ဖြတ်ထုတ်မှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ဖို့တွေကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
ဆာရီဟာ တစ်ရာသီလုံးမှာ ကွင်းလယ် သုံးယောက်တန်းကိုပဲ အဓိက အသုံးပြုတဲ့ သဏ္ဍန်ကို မပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ ခံစစ်ကာကွယ်နေချိန်မှာ တောင်ပံသမားတွေက ခပ်မြင့်မြင်မှာနေပြီး တိုက်စစ်ကို ဖြန့်ထားမယ်။ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်သမားတွေက ပြိုင်ဘက်ကို ၄င်းတို့ရဲ့ ဂိုးဧရိယာထိရောက်အောင် ဖိအားတက်ပေးမယ်။ တိုက်စစ်ဆင်ချိန်မှာတော့ တောင်ပံသမားတွေက အထောင်တိုက်စစ်နေရာတွေကို ဝင်ရောက်လာပြီး အလွန်ဆိုနဲ့ ကွီတာတို့က အစွန်တွေကနေ တိုက်စစ်လိုက်ပါပါတယ်။
ဂျော်ဂျင်ဟိုဟာ ကွင်းလယ်ရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး ကစားရှိန် အတင်၊ အချကို ပေးမှုတွေနဲ့ ထိန်းညိပေးရကာ ကွင်းထဲမှာ ဘောလုံးထိချက် အများဆုံး ကစားသမားလည်းဖြစ်တယ်။ ဂျော်ဂျင်ဟိုရဲ့ အဓိက အလုပ်ကတော့ ပေးမှုတွေ အဆက်မပြတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ တိုက်စစ်လမ်းကြောင်း ပွင့်စေဖို့ဖြစ်တယ်။
လူတိုင်းက မေးခွန်းတစ်ခုလုပ်ကြတာရှိတယ်။ ဒီရာသီမှာ ဂိုးထောက်ပံ့မှု တစ်ကြိမ်တောင်မှ မလုပ်နိုင်ပဲ ခံစစ်ကြောင်းရဲ့ရှေ့မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟိုရဲ့ ခံစစ်အားနည်းမှုကို ဝေဖန်ကြပေမယ့် ကန်တီကို ဘာလို့များ ခံစစ်ကို တွဲဘက် တာဝန်ယူခွင့်မပြုလဲလို့ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုတည်းသော ဖြစ်နိုင်ချေက ကွင်းလယ်ကို double pivot ထားကစားမယ်ဆိုရင် ဘောလုံးဟာ ဆာရီအလိုရှိသလို မှန်မှန်နဲ့ မြန်မြန် ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်လို့ပါပဲ။ ဆာရီဟာ သူ့ရဲ့အသင်း ကစားကွက်ကို သုံးပွင့်ဆိုင်ပေးမှုတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။
အကယ်လို ကန်တီနဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟိုကို ကွင်းလယ်မှာ double pivot ထားမယ်ဆိုရင် ချယ်ဆီးရဲ့ ဖိအားပေးကစားဟန်ဟာ ပြိုင်ဘက်ကို ဖိအားပေးဖို့ရာ ခက်ခဲသွားမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက်အသင်းကို နောက်ပြန်ပေးမှုနဲ့ ဘေးထိုးပေးမှုတွေကို ခပ်လွယ်လွယ်ပြုလုပ်စေဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရသွားစေပါမယ်။
အာဆင်နယ်ရဲ့ လူစာရင်းက ဘယ်လိုလဲ
အူနိုင်းအမ်မရီဟာ ဒီရာသီမှာ ခံစစ်လေးယောက်တန်းကော၊ သုံးယောက်တန်းကော ထားကစားပါတယ်။ 4-2-3-1 ကစားကွက်နဲ့ ကစားတဲ့ပွဲမှာ ချယ်ဆီးကို 3-2 နဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီး 4-4-2 စိန်ပွင့်ပုံစံ ကစားကွက်နဲ့တော့ 2-0 နဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ အမ်မရီဟာ တိုက်စစ်နှစ်ဦးတွဲကို သေချာပေါက် အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီး ရမ်ဆေးနဲ့ မီခီတာရန်လို ကစားသမားတွေ မပါဝင်ချိန်မှာ 3-4-1-2 ကစားကွက်ကို အသုံးပြုဖို့ များပါတယ်။ လာကာဇက်နဲ့ အူဘာတို့ကို တွဲသုံးတာက အမ်မရီအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး ကျန် အသင်းသားတွေက တိုက်စစ်အတွဲကို ဝန်းရံကာ ကစားကြမှာဖြစ်တယ်။
တိုက်စစ်နှစ်ဦးတွဲအဖြစ် စထွက်လာခြင်းထက် တိုက်စစ်သမားတစ်ဦးက အစွန်ကို ထွက်ကစားစေတာနဲ့ တိုက်စစ်သမားတစ်ဦးက ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်နေရာကို ဆင်းကစားစေတာမျိုးကို မြင်ရဖို့ရှိပါမယ်။ အူဘာမီယန်ဟာ ကစားကွက်တည်ဆောက်မှုတွေမှာ ပါဝင်ဖို့မရှိပဲ ထိချက်အနည်းငယ် ပြုလုပ်ပြီး အရှိန်ကောင်းရှိတဲ့ ဂါဘွန်တိုက်စစ်မှူးအတွက် လာကာဇက်တီက အတွင်းကို ဆင်းကစားပေးတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ကစားဟန်နဲ့ စိန်ပွင့်ပုံ ကစားကွက်တွေမှာ အထိုင်က ဇာခါဖြစ်တယ်။ ဘေးတစ်ဘက်တွေမှာ ဂူရန်ဒေါင်ဇီနဲ့ တော်ရဲရားတို့ကို ကွင်းလယ် နှစ်ယောက်တန်းအဖြစ်ထားကာ၊ ခံစစ်အတွက် ကာကွယ်ဖို့ကော ဘောလုံးအတိုပေးမှုတွေကို သက်သောင့်သက်သာ မလုပ်စေဖို့ ပြေးလွှား ဖြတ်ထုတ်ရာမှာပါ အသုံးပြုဖို့ ရှိနေတယ်။
အမ်မရီရဲ့ တိုက်စစ် နံပါတ် 10 နေရာမှာ ရမ်ဆေးက အရမ်းကို ထူးချွန်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဒဏ်ရာကြောင့် သူမပါနိုင်သလို မီခီတာရန်ကလည်း ဘာကူကို လိုက်မလာနိုင်ပါဘူး။ အမ်မရီဟာ အီဝိုဘီနဲ့ အိုဇေးကိုပဲ ကွင်းလယ်နဲ့ တိုက်စစ်ကြား ချိတ်ဆက်သူအဖြစ် အသုံးပြုရဖို့ဖြစ်ပြီး ဂျာမန်သားဟာ သူ့အပေါ်မှာ လူတွေမြင်တယ်ဆိုတာ မှားယွင်းတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်မလားက စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
ဗိုလ်လုပွဲမှာ အမှားတစ်ချက်ဟာ ရလဒ်ကို အဆုံးအဖြတ် ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ အိုဇေးဟာ အခွင့်အရေးတွေ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း ရှိပေမယ့် စိတ်ပျက်စရာ ရာသီတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ရမ်ဆေးနဲ့ အိုဇေးကြားမှာ အဓိက ကွာခြားမှုက ရမ်ဆေးက ဘောလုံးကို ပြန်ရယူပြီး ကောင်တာတိုက်စစ်တွေကို ပြန်စဖို့ရာ ဂျာမန်သားထက် စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြစွာ အားထုတ်မှု သာလွန်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှု နှစ်ကြိမ်မှာ အာဆင်နယ်ဟာ ချယ်ဆီးအသင်းကို ပြိုင်ဘက်ဧရိယာထိပ်မှာတင် ဖိအားပေး ကစားတာမျိုး မြင်ခဲ့ရတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဒီတာဝန်ကို အိုဇေးက ရယူရမှာပါ။ ဘောလုံးကို ပြန်ရယူဖို့ရာ ဖိအားပေးမှု၊ ရန်လိုမှုတွေနဲ့ ကွင်းတစ်ဘက်ခြမ်းကို လွှမ်းခြုံကစားရမှာဖြစ်တယ်။
အာဆင်နယ်ရဲ့ ကွင်းလယ် နံပါတ် 10 နေရာကို မည်သူတာဝန်ယူသည်ဖြစ်စေ ချယ်ဆီးရဲ့ ပေးမှုတွေမှာ အဓိကကျတဲ့ ဂျော်ဂျင်ဟိုကို ဖြတ်တောက်ရပါမယ်။ ဂျော်ဂျင်ဟိုဟာ ဖိအားပေးခံရတဲ့ အနေအထားမှာ အတိုပေးတွေပဲ အဓိက လုပ်နိုင်ပြီး အာဆင်နယ်ဘက်က ယှဉ်ပြိုင်သူဟာ သူ့ရဲ့ပေးဟန်ကို ဖတ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ရမ်ဆေးဟာ အဲ့သည်အပိုင်းမှာ ထူးချွန်သူဖြစ်တယ်။
ဂျော်ဂျင်ဟိုရဲ့ ပြဿနာကို ဆာရီက လူးဝစ်နဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းသလဲ
ဆာရီဟာ သူ့ရဲ့ကစားကွက်မှာ ဂျော်ဂျင်ဟိုနဲ့ အဓိက တည်ဆောက်ပေမယ့် အီတလီသား အကောင်းဆုံး မစွမ်းနိုင်ချိန်မှာ နောက်ထပ် လှည့်စားမှုတစ်ခုအဖြစ် လူးဝစ်ရဲ့ အဝေးပေးမှု စွမ်းရည်ကောင်းကို အသုံးချလေ့ရှိတယ်။ လူးဝစ်ဟာ ခံစစ်တန်းရဲ့ ဘယ်ခြမ်းကို တာဝန်ယူသူဖြစ်ပြီး သူဟာ ချယ်ဆီးတိုက်စစ်ရဲ့ ညာခြမ်းတောင်ပံတွေကို အဝေးဘောတွေနဲ့ အဓိက ထောက်ပံ့သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။
အကယ်လို့ ပြိုင်ဘက်က ဂျော်ဂျင်ဟိုကို လူကပ်တဲ့အခါ ဂျော်ဂျင်ဟိုက အတိုပေးနဲ့ ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားတတ်သလို လူးဝစ်ကလည်း သူကိုယ်တိုင် တိုက်စစ်ပေးမှုတွေနဲ့ ရှေ့မှာ ဖြန့်ကစားနေတဲ့ တောင်ပံသမားတွေကို ဘောလုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ အကယ်လို့ ပြိုင်ဘက်က လူးဝစ်ကို လူကပ်လာရင်တော့ ဂျော်ဂျင်ဟိုက လူကပ်ခြင်းကနေ လွတ်အောင် ရုန်းထွက်ထားလေ့ရှိတယ်။
ဘာလို့ အာဆင်နယ်က ခံစစ်သုံးယောက်တန်း ကစားနိုင်သလဲ
အာဆင်နယ်မှာ သုံးလိုရနေတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ညာအစွန်လူကတောင် ညာအစွန်သမားစစ်စစ် မဟုတ်ပါဘူး။ သူက ဟာဇက်ကို ဟန့်တားဖို့ဆိုတာက အခက်အခဲတစ်ခုပါ။ အကယ်လို့ မစ်လန်နေးကို ညာအစွန်မှာ ထားမယ်ဆိုရင် ဟာဇက်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့စေဖို့က မမျှတပါဘူး။ ဘယ်လာရင်ဆိုရင်တော့ ဟာဇက်ကို ထိန်းဖို့ လိုက်မှီနိုင်ပေမယ့် သူက ပါဝင်ကစားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သြဂုတ်လတုန်းက ချယ်ဆီးက အာဆင်နယ်ကို 3-2 နဲ့ နိုင်ခဲ့စဉ်မှာ အာဆင်နယ် ခံစစ်လေးယောက်တန်းက ညာအစွန်နဲ့ ညာခြမ်းခံစစ်ကြားကို ဟာဇက်က နေရာလွတ်တွေ ဖန်တီးခဲ့ပြီး ဒုက္ခပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ဗိုလ်ုလပွဲမှာ အာဆင်နယ်က သုံးယောက်တန်း ကစားမယ်ဆိုရင် ညာခြမ်းခံစစ်သမားနဲ့ ဗဟိုခံစစ်သမားက ပိုနီးသွားမှာဖြစ်ပြီး ညာခြမ်းကွင်းလယ်လူ တော်ရဲရားက ဝင်ရောက်အားဖြည့်ကာ ကစားနိုင်မှာပါ။ သုံးယောက်တန်း ကစားမယ်ဆိုရင် ဟာဇက်ကို တစ်ဦးချင်းထက် နှစ်ေယာက်တစ်ယောက် အနေအထားနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဆာရီဟာ ဟာဇက်ကို တိုက်စစ်အတွက် အဓိက အသုံးပြုလို့ အမ်မရီက ဟာဇက်ကိုထိန်းဖို့ ကစားသမား တစ်ဦးထက် ပိုသုံးဖို့ အဆင်ပြေမယ့် ခံစစ် သုံးယောက်တန်းကို ထုတ်သုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။
ချယ်ဆီးဘက်က ကောင်တာတိုက်စစ်ကစားဖို့ရာ ဟာဇက်နောက်မှာ အလွန်ဆိုကို လိုက်ပါစေတာဖြစ်ပြီး တောင်ပံကနေ ဟာဇက်ဟာ အတွင်းကိုဝင်ပြီး အလွန်ဆိုကို တောင်ပံအား လွဲပေးကာ မူစတာဖီနဲ့ တစ်ဦးချင်း ယှဉ်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ တကယ်ကို ဒုက္ခကြီးတွေက အဲ့သည်မှာ စဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်ရဲ့ တည်ကန်ဘော ထူးချွန်မှု
ချယ်ဆီးကို ဂန်းနားတို့ အနိုင်ယူခဲ့စဉ် သွင်းယူခဲ့တဲ့ နှစ်ဂိုးလုံးက တည်ကန်ဘောကနေ လာတာဖြစ်တယ်။ အာဆင်နယ်ဟာ ခေါင်းတိုက်ကောင်းတဲ့ ခံစစ်သမားတွေကော မွှေနှောက်ကစားနိုင်တဲ့ တိုက်စစ်သမားတွေကော ဧရိယာထဲ ရောထည့်ထားလေ့ရှိတယ်။
ချယ်ဆီးအသင်းသားတွေက ခံစစ်သမားတွေကို အားပြုခဲ့စဉ် တိုက်စစ်သမား လာကာဇက်တီက အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီး ခံစစ်သမားတွေကလည်း သူတို့ကို အမြင့်ဘော မတားဆီးနိုင်တဲ့ ချယ်ဆီးခံစစ်က ကွင်းလယ်လူတွေထံ ပြေးဝင်ထားလေးရှိတာကို အရင်ပွဲတွေမှာ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့သည်လို အနေအထားကပဲ ကိုစီရယ်နီဟာ ချယ်ဆီးခံစစ်ကို ဒုက္ခပေးခဲ့ပါတယ်။
မန်နေဂျာ နှစ်ဦးလုံးဟာ ကိုယ်ပိုင် အခက်အခဲတွေရှိထားသလို နှစ်ဦးလည်းကလည်း ဟာဇက်၊ အူဘာမီယန်တို့လို တိုက်စစ်သမားကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒီရာသီ ထိပ်တိုက်တွေမှုတွေမှာ အကောင်းဆုံး နည်းစနစ်တွေကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့ ဒီနှစ်သင်းမှာ ချယ်ဆီးက ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရထားလို့ ဖိအားနည်းနေပြီး အာဆင်နယ်ကတော့ ဒီပြိုင်ပွဲအတွက် အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ အမ်မရီကို ရရှိထားတဲ့ အားသာချက်ကိုယ်စီ ရှိနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
[Unicode] အပွာရောငျအသငျးဖွဈတဲ့ ခယျြဆီးဟာ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ ရရှိထားပွီဖွဈပွီး ဆာရီရဲ့ ပထမဆုံးသော ဆုဖလား အောငျမွငျမှုအဖွဈ ယူရိုပါလိဂျဖလား အနိုငျရဖို့ ရညျရှယျနတောပါ။ အနီရောငျအသငျးဖွဈတဲ့ အာဆငျနယျကိုတော့ ယူရိုပါလိဂျဖလား သုံးကွိမျအနိုငျရ အမျမရီက ဦးဆောငျပွီး ခနျြပီယံဘှဲနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ ရလိုနတောဖွဈတယျ။
အမျမရီဟာ ဆီးဗီးလာအသငျးမှာ ယူရိုပါလိဂျဖလားကို အတှအေ့ကွုံတှေ ရငျ့ကကျြထားပွီး ဒီနှဈသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပွိုငျပှဲမှာ ထိပျတိုကျတှဆေုံ့ဖူးကွသလို အဓိက ကစားသမာေးတှ မပါပဲယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈတယျ။ နောကျပွီး ဘာကူဟာ အင်ျဂလနျမှာနဲ့ မတူညီတဲ့ အားပေးမှုအငှအေ့သကျတှေ ရှိပါလိမျ့မယျ။
ယူရိုပါလိဂျပွိုငျပှဲမှာ နှဈသငျးဟာ ဘယျလိုနညျးစနဈတှေ ကငျြ့သုံးလာမလဲ? အရငျတှဆေုံ့မှုတှကေကော ဘယျလိုဖွဈခဲ့လဲ? ဒါတှကေို လလေ့ာကွညျ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ခယျြဆီးအသငျး လူစာရငျးက ဘယျလိုလဲ
ခယျြဆီးကှငျးလယျလူ ကနျတီဟာ ဒူးဒဏျရာရနခေဲ့ပွီး ဗိုလျလုပှဲမှာ ပါဝငျဖို့က 50-50 အနအေထားဖွဈပါတယျ။ လော့တပျခြိဈ ပါဝငျဖို့မရှိတာကွောငျ့ သူတို့နှဈဦးနရော ကိုဗာဆဈနဲ့ ဘာကလတေို့ ပါဝငျလာနိုငျပါတယျ။ ကနျတီကို လကျလှတျရခွငျးဟာ ခယျြဆီးအတှကျ ကွီးမားတဲ့ ဆုံးရှူံးမှုပါ။ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲတှမှော ကိုဗာဆဈထကျ တိုကျစဈ၊ ခံစဈ တောငျးဆိုခံရမှု မြားပွားသလို ဘောလုံး ပိုငျဆိုငျထားခြိနျနဲ့ ဘောလုံးမရှိခြိနျတှမှော ကိုဗာဆဈထကျ လှမျးမိုးမှု ကွီးမားသူဖွဈတယျ။
ဘာကလဟော လော့တပျခြိဈနရော အစားဝငျလာမှာပါ။ ဆာရီရဲ့ ကှငျးလယျလုပျဆောငျမှုမှာ လော့တပျခြိဈက ဘောလုံးကို ပိုကွာကွာ ကိုငျထားနိုငျတယျ၊ အလှိမျအခေါကျတှေ ပိုလုပျနိုငျစှမျးရှိပွီး တိုကျစဈပိုငျး ပိုထကျမွကျတယျ။ ဘာကလကေတော့ အခှငျ့အရေးတှေ ဖနျတီးပေးနိုငျပွီး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ပိုမိုပေါကျကှဲနိုငျစှမျးရှိတယျ။ ဘာကလဟော ပွိုငျဘကျရဲ့ ကောငျတာတိုကျစဈတှကေို ဟနျ့တားဖို့ရာ ဖွတျထုတျမှုနဲ့ ပွဈဒဏျကြူးလှနျဖို့တှကေိုလညျး လုပျဆောငျနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။
ဆာရီဟာ တဈရာသီလုံးမှာ ကှငျးလယျ သုံးယောကျတနျးကိုပဲ အဓိက အသုံးပွုတဲ့ သဏ်ဍနျကို မပွောငျးလဲခဲ့ပါဘူး။ ခံစဈကာကှယျနခြေိနျမှာ တောငျပံသမားတှကေ ခပျမွငျ့မွငျမှာနပွေီး တိုကျစဈကို ဖွနျ့ထားမယျ။ ကှငျးလယျတိုကျစဈသမားတှကေ ပွိုငျဘကျကို ၎င်းငျးတို့ရဲ့ ဂိုးဧရိယာထိရောကျအောငျ ဖိအားတကျပေးမယျ။ တိုကျစဈဆငျခြိနျမှာတော့ တောငျပံသမားတှကေ အထောငျတိုကျစဈနရောတှကေို ဝငျရောကျလာပွီး အလှနျဆိုနဲ့ ကှီတာတို့က အစှနျတှကေနေ တိုကျစဈလိုကျပါပါတယျ။
ဂြျောဂငျြဟိုဟာ ကှငျးလယျရဲ့ အခွခေံအုတျမွဈဖွဈပွီး ကစားရှိနျ အတငျ၊ အခကြို ပေးမှုတှနေဲ့ ထိနျးညိပေးရကာ ကှငျးထဲမှာ ဘောလုံးထိခကျြ အမြားဆုံး ကစားသမားလညျးဖွဈတယျ။ ဂြျောဂငျြဟိုရဲ့ အဓိက အလုပျကတော့ ပေးမှုတှေ အဆကျမပွတျလုပျခွငျးနဲ့ တိုကျစဈလမျးကွောငျး ပှငျ့စဖေို့ဖွဈတယျ။
လူတိုငျးက မေးခှနျးတဈခုလုပျကွတာရှိတယျ။ ဒီရာသီမှာ ဂိုးထောကျပံ့မှု တဈကွိမျတောငျမှ မလုပျနိုငျပဲ ခံစဈကွောငျးရဲ့ရှမှေ့ာ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ လိုအပျခကျြရှိတဲ့ ဂြျောဂငျြဟိုရဲ့ ခံစဈအားနညျးမှုကို ဝဖေနျကွပမေယျ့ ကနျတီကို ဘာလို့မြား ခံစဈကို တှဲဘကျ တာဝနျယူခှငျ့မပွုလဲလို့ဖွဈတယျ။ တဈခုတညျးသော ဖွဈနိုငျခကြေ ကှငျးလယျကို double pivot ထားကစားမယျဆိုရငျ ဘောလုံးဟာ ဆာရီအလိုရှိသလို မှနျမှနျနဲ့ မွနျမွနျ ပေးနိုငျမှာ မဟုတျလို့ပါပဲ။ ဆာရီဟာ သူ့ရဲ့အသငျး ကစားကှကျကို သုံးပှငျ့ဆိုငျပေးမှုတှနေဲ့ တညျဆောကျထားတာဖွဈတယျ။
အကယျလို ကနျတီနဲ့ ဂြျောဂငျြဟိုကို ကှငျးလယျမှာ double pivot ထားမယျဆိုရငျ ခယျြဆီးရဲ့ ဖိအားပေးကစားဟနျဟာ ပွိုငျဘကျကို ဖိအားပေးဖို့ရာ ခကျခဲသှားမှာဖွဈပွီး ပွိုငျဘကျအသငျးကို နောကျပွနျပေးမှုနဲ့ ဘေးထိုးပေးမှုတှကေို ခပျလှယျလှယျပွုလုပျစဖေို့ အခှငျ့အရေးတှေ ရသှားစပေါမယျ။
အာဆငျနယျရဲ့ လူစာရငျးက ဘယျလိုလဲ
အူနိုငျးအမျမရီဟာ ဒီရာသီမှာ ခံစဈလေးယောကျတနျးကော၊ သုံးယောကျတနျးကော ထားကစားပါတယျ။ 4-2-3-1 ကစားကှကျနဲ့ ကစားတဲ့ပှဲမှာ ခယျြဆီးကို 3-2 နဲ့ အရေးနိမျ့ခဲ့ပွီး 4-4-2 စိနျပှငျ့ပုံစံ ကစားကှကျနဲ့တော့ 2-0 နဲ့ အနိုငျရခဲ့တာဖွဈတယျ။
ယူရိုပါလိဂျ ဗိုလျလုပှဲမှာတော့ အမျမရီဟာ တိုကျစဈနှဈဦးတှဲကို သခြောပေါကျ အသုံးပွုမှာဖွဈပွီး ရမျဆေးနဲ့ မီခီတာရနျလို ကစားသမားတှေ မပါဝငျခြိနျမှာ 3-4-1-2 ကစားကှကျကို အသုံးပွုဖို့ မြားပါတယျ။ လာကာဇကျနဲ့ အူဘာတို့ကို တှဲသုံးတာက အမျမရီအတှကျ အကောငျးဆုံး ရှေးခယျြမှုဖွဈပွီး ကနျြ အသငျးသားတှကေ တိုကျစဈအတှဲကို ဝနျးရံကာ ကစားကွမှာဖွဈတယျ။
တိုကျစဈနှဈဦးတှဲအဖွဈ စထှကျလာခွငျးထကျ တိုကျစဈသမားတဈဦးက အစှနျကို ထှကျကစားစတောနဲ့ တိုကျစဈသမားတဈဦးက ကှငျးလယျဖနျတီးရှငျနရောကို ဆငျးကစားစတောမြိုးကို မွငျရဖို့ရှိပါမယျ။ အူဘာမီယနျဟာ ကစားကှကျတညျဆောကျမှုတှမှော ပါဝငျဖို့မရှိပဲ ထိခကျြအနညျးငယျ ပွုလုပျပွီး အရှိနျကောငျးရှိတဲ့ ဂါဘှနျတိုကျစဈမှူးအတှကျ လာကာဇကျတီက အတှငျးကို ဆငျးကစားပေးတာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ကစားဟနျနဲ့ စိနျပှငျ့ပုံ ကစားကှကျတှမှော အထိုငျက ဇာခါဖွဈတယျ။ ဘေးတဈဘကျတှမှော ဂူရနျဒေါငျဇီနဲ့ တျောရဲရားတို့ကို ကှငျးလယျ နှဈယောကျတနျးအဖွဈထားကာ၊ ခံစဈအတှကျ ကာကှယျဖို့ကော ဘောလုံးအတိုပေးမှုတှကေို သကျသောငျ့သကျသာ မလုပျစဖေို့ ပွေးလှား ဖွတျထုတျရာမှာပါ အသုံးပွုဖို့ ရှိနတေယျ။
အမျမရီရဲ့ တိုကျစဈ နံပါတျ 10 နရောမှာ ရမျဆေးက အရမျးကို ထူးခြှနျထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဗိုလျလုပှဲမှာ ဒဏျရာကွောငျ့ သူမပါနိုငျသလို မီခီတာရနျကလညျး ဘာကူကို လိုကျမလာနိုငျပါဘူး။ အမျမရီဟာ အီဝိုဘီနဲ့ အိုဇေးကိုပဲ ကှငျးလယျနဲ့ တိုကျစဈကွား ခြိတျဆကျသူအဖွဈ အသုံးပွုရဖို့ဖွဈပွီး ဂြာမနျသားဟာ သူ့အပျေါမှာ လူတှမွေငျတယျဆိုတာ မှားယှငျးတယျဆိုတာကို သကျသပွေနိုငျမလားက စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။
ဗိုလျလုပှဲမှာ အမှားတဈခကျြဟာ ရလဒျကို အဆုံးအဖွတျ ပေးသှားနိုငျပါတယျ။ အိုဇေးဟာ အခှငျ့အရေးတှေ ဖနျတီးနိုငျစှမျး ရှိပမေယျ့ စိတျပကျြစရာ ရာသီတဈခုကို ပိုငျဆိုငျထားတာပါ။ ရမျဆေးနဲ့ အိုဇေးကွားမှာ အဓိက ကှာခွားမှုက ရမျဆေးက ဘောလုံးကို ပွနျရယူပွီး ကောငျတာတိုကျစဈတှကေို ပွနျစဖို့ရာ ဂြာမနျသားထကျ စိတျဆန်ဒပွငျးပွစှာ အားထုတျမှု သာလှနျပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ထိပျတိုကျတှမှေု့ နှဈကွိမျမှာ အာဆငျနယျဟာ ခယျြဆီးအသငျးကို ပွိုငျဘကျဧရိယာထိပျမှာတငျ ဖိအားပေး ကစားတာမြိုး မွငျခဲ့ရတယျ။ ဗိုလျလုပှဲမှာ ဒီတာဝနျကို အိုဇေးက ရယူရမှာပါ။ ဘောလုံးကို ပွနျရယူဖို့ရာ ဖိအားပေးမှု၊ ရနျလိုမှုတှနေဲ့ ကှငျးတဈဘကျခွမျးကို လှမျးခွုံကစားရမှာဖွဈတယျ။
အာဆငျနယျရဲ့ ကှငျးလယျ နံပါတျ 10 နရောကို မညျသူတာဝနျယူသညျဖွဈစေ ခယျြဆီးရဲ့ ပေးမှုတှမှော အဓိကကတြဲ့ ဂြျောဂငျြဟိုကို ဖွတျတောကျရပါမယျ။ ဂြျောဂငျြဟိုဟာ ဖိအားပေးခံရတဲ့ အနအေထားမှာ အတိုပေးတှပေဲ အဓိက လုပျနိုငျပွီး အာဆငျနယျဘကျက ယှဉျပွိုငျသူဟာ သူ့ရဲ့ပေးဟနျကို ဖတျနိုငျစှမျးရှိဖို့ လိုပါတယျ။ ရမျဆေးဟာ အဲ့သညျအပိုငျးမှာ ထူးခြှနျသူဖွဈတယျ။
ဂြျောဂငျြဟိုရဲ့ ပွဿနာကို ဆာရီက လူးဝဈနဲ့ ဘယျလိုဖွရှေငျးသလဲ
ဆာရီဟာ သူ့ရဲ့ကစားကှကျမှာ ဂြျောဂငျြဟိုနဲ့ အဓိက တညျဆောကျပမေယျ့ အီတလီသား အကောငျးဆုံး မစှမျးနိုငျခြိနျမှာ နောကျထပျ လှညျ့စားမှုတဈခုအဖွဈ လူးဝဈရဲ့ အဝေးပေးမှု စှမျးရညျကောငျးကို အသုံးခလြရှေိ့တယျ။ လူးဝဈဟာ ခံစဈတနျးရဲ့ ဘယျခွမျးကို တာဝနျယူသူဖွဈပွီး သူဟာ ခယျြဆီးတိုကျစဈရဲ့ ညာခွမျးတောငျပံတှကေို အဝေးဘောတှနေဲ့ အဓိက ထောကျပံ့သူတဈဦးဖွဈတယျ။
အကယျလို့ ပွိုငျဘကျက ဂြျောဂငျြဟိုကို လူကပျတဲ့အခါ ဂြျောဂငျြဟိုက အတိုပေးနဲ့ ရုနျးထှကျဖို့ ကွိုးစားတတျသလို လူးဝဈကလညျး သူကိုယျတိုငျ တိုကျစဈပေးမှုတှနေဲ့ ရှမှေ့ာ ဖွနျ့ကစားနတေဲ့ တောငျပံသမားတှကေို ဘောလုံးပေးနိုငျပါတယျ။ အကယျလို့ ပွိုငျဘကျက လူးဝဈကို လူကပျလာရငျတော့ ဂြျောဂငျြဟိုက လူကပျခွငျးကနေ လှတျအောငျ ရုနျးထှကျထားလရှေိ့တယျ။
ဘာလို့ အာဆငျနယျက ခံစဈသုံးယောကျတနျး ကစားနိုငျသလဲ
အာဆငျနယျမှာ သုံးလိုရနတေဲ့ တဈဦးတညျးသော ညာအစှနျလူကတောငျ ညာအစှနျသမားစဈစဈ မဟုတျပါဘူး။ သူက ဟာဇကျကို ဟနျ့တားဖို့ဆိုတာက အခကျအခဲတဈခုပါ။ အကယျလို့ မဈလနျနေးကို ညာအစှနျမှာ ထားမယျဆိုရငျ ဟာဇကျနဲ့ ထိပျတိုကျတှစေ့ဖေို့က မမြှတပါဘူး။ ဘယျလာရငျဆိုရငျတော့ ဟာဇကျကို ထိနျးဖို့ လိုကျမှီနိုငျပမေယျ့ သူက ပါဝငျကစားနိုငျမှာ မဟုတျဘူး။ သွဂုတျလတုနျးက ခယျြဆီးက အာဆငျနယျကို 3-2 နဲ့ နိုငျခဲ့စဉျမှာ အာဆငျနယျ ခံစဈလေးယောကျတနျးက ညာအစှနျနဲ့ ညာခွမျးခံစဈကွားကို ဟာဇကျက နရောလှတျတှေ ဖနျတီးခဲ့ပွီး ဒုက်ခပေးခဲ့တာဖွဈတယျ။
ဗိုလျုလပှဲမှာ အာဆငျနယျက သုံးယောကျတနျး ကစားမယျဆိုရငျ ညာခွမျးခံစဈသမားနဲ့ ဗဟိုခံစဈသမားက ပိုနီးသှားမှာဖွဈပွီး ညာခွမျးကှငျးလယျလူ တျောရဲရားက ဝငျရောကျအားဖွညျ့ကာ ကစားနိုငျမှာပါ။ သုံးယောကျတနျး ကစားမယျဆိုရငျ ဟာဇကျကို တဈဦးခငျြးထကျ နှဈေယာကျတဈယောကျ အနအေထားနဲ့ ရငျဆိုငျနိုငျမှာဖွဈတယျ။ ဆာရီဟာ ဟာဇကျကို တိုကျစဈအတှကျ အဓိက အသုံးပွုလို့ အမျမရီက ဟာဇကျကိုထိနျးဖို့ ကစားသမား တဈဦးထကျ ပိုသုံးဖို့ အဆငျပွမေယျ့ ခံစဈ သုံးယောကျတနျးကို ထုတျသုံးဖို့ ဆုံးဖွတျလာနိုငျတာဖွဈတယျ။
ခယျြဆီးဘကျက ကောငျတာတိုကျစဈကစားဖို့ရာ ဟာဇကျနောကျမှာ အလှနျဆိုကို လိုကျပါစတောဖွဈပွီး တောငျပံကနေ ဟာဇကျဟာ အတှငျးကိုဝငျပွီး အလှနျဆိုကို တောငျပံအား လှဲပေးကာ မူစတာဖီနဲ့ တဈဦးခငျြး ယှဉျဆိုငျမှာဖွဈတယျ။ တကယျကို ဒုက်ခကွီးတှကေ အဲ့သညျမှာ စဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
အာဆငျနယျရဲ့ တညျကနျဘော ထူးခြှနျမှု
ခယျြဆီးကို ဂနျးနားတို့ အနိုငျယူခဲ့စဉျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ နှဈဂိုးလုံးက တညျကနျဘောကနေ လာတာဖွဈတယျ။ အာဆငျနယျဟာ ခေါငျးတိုကျကောငျးတဲ့ ခံစဈသမားတှကေော မှနှေောကျကစားနိုငျတဲ့ တိုကျစဈသမားတှကေော ဧရိယာထဲ ရောထညျ့ထားလရှေိ့တယျ။
ခယျြဆီးအသငျးသားတှကေ ခံစဈသမားတှကေို အားပွုခဲ့စဉျ တိုကျစဈသမား လာကာဇကျတီက အဆုံးသတျခဲ့ပွီး ခံစဈသမားတှကေလညျး သူတို့ကို အမွငျ့ဘော မတားဆီးနိုငျတဲ့ ခယျြဆီးခံစဈက ကှငျးလယျလူတှထေံ ပွေးဝငျထားလေးရှိတာကို အရငျပှဲတှမှော မွငျခဲ့ရပါတယျ။ အဲ့သညျလို အနအေထားကပဲ ကိုစီရယျနီဟာ ခယျြဆီးခံစဈကို ဒုက်ခပေးခဲ့ပါတယျ။
မနျနဂြော နှဈဦးလုံးဟာ ကိုယျပိုငျ အခကျအခဲတှရှေိထားသလို နှဈဦးလညျးကလညျး ဟာဇကျ၊ အူဘာမီယနျတို့လို တိုကျစဈသမားကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ ဒီရာသီ ထိပျတိုကျတှမှေုတှမှော အကောငျးဆုံး နညျးစနဈတှကေိုလညျး အသုံးပွုခဲ့ကွတဲ့ ဒီနှဈသငျးမှာ ခယျြဆီးက ခနျြပီယံလိဂျဝငျခှငျ့ရထားလို့ ဖိအားနညျးနပွေီး အာဆငျနယျကတော့ ဒီပွိုငျပှဲအတှကျ အတှအေ့ကွုံရငျ့တဲ့ အမျမရီကို ရရှိထားတဲ့ အားသာခကျြကိုယျစီ ရှိနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။